Afaka mampihatra effets amin'ny sary avy amin'ny galerianao amin'ny Instagram Stories | Androidsis
ny Ny tantara Instagram dia nihatsara hatrany ary manana zava-baovao isika izao: ireo sivana mihetsika vaovao ho an'ireo sary izay ananantsika ao amin'ny galeriantsika manokana. Izany hoe, mamela antsika hampiasa sary izay namboarinay ny Instagram.
Instagram iray izay manohy mampifangaro traikefa lehibe kokoa, toa ilay iray izay ho vitantsika tsy ho ela Miezaha mizara ny atiny Netflix amin'ny Tantara mitovy. Andao hojerentsika izay momba azy ity zava-baovao entin'ny tambajotra sosialy ity Fashion.
Ny zava-baovao sy ny tena mahaliana amin'ny tambajotra sosialy toy ny Instagram dia ny ahafahantsika manitsy ireo sary sy horonan-tsary ao amin'ny galeriana. Izany hoe afaka mampiasa isika sticker ary ireo animated hahafahantsika misafidy amin'ny valiny mahavariana izay hisarika ny sain'ny namanay; na ny mpanjifa raha toa kaonty ofisialy amin'ny marika na orinasa izy io.
Ny tsy maintsy tadidinao rehefa hampihatra ireo sticker vita amin'ny Instagram Stories izahay dia ireo sary ireo tsy maintsy tarehy izy ireo mba hahafantaran'ny algorithm ny fampiharana azy. Raha tsy izany dia tsy ho afaka hanao na inona na inona isika ary hamela antsika hisalasala tsy hahatakatra na inona na inona.
Tadidio fa raha te hiditra amin'ireo safidy tokony hataonao ianao swipe avy any ambany ka hatrany ambony hiditra amin'ny atin'ny galeriany ary avy eo safidio ny sary (tarehy izany) hampihatra ireo vokatra mahafinaritra ireo. Avy eo isika dia hanana safidy hitahiry ny sary raha tiantsika, tahaka ny hitranga amin'ny ambiny izay ananantsika ao amin'ny mombamomba antsika.
Una Instagram izay manohy manampy atiny bebe kokoa amin'ny traikefa tsy mitovy amin'ny an'ny tambajotra hafa ary midika izany fa ny ampahany amin'ny tanora dia tsy afaka miaina raha tsy misy ity tambajotra sosialy ity. Andao atao hoe mandalo eto ny fiainanao; isika ihany no tsy maintsy mahalala izay hitranga amin'ity taranaka ity rehefa lehibe sy mihalehibe izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ny tantara Instagram dia mamoaka sivana mihetsika vaovao ho an'ireo sary ao amin'ny galerianao
Misy telefaona Oppo vaovao miseho: ireo no mari-pahaizana voamarina ao aminy